5 Ndụmọdụ Maka ingmepụta Pọtụfoliyo Na-ese Onlinentanetị - LucidPix
Zọ kachasị mma iji gosipụta nka foto gị dị ịtụnanya ma bido ọrụ gị dị ka onye na-ese foto bụ imepụta Pọtụfoliyo ịntanetị foto. Ọ bụ ezie na ịre ahịa onwe gị na mgbasa ozi mmekọrịta dị mkpa, ọtụtụ ndị ahịa na-elele ọnụọgụ ndị na-ese foto iji chọpụta onye na-ese foto ha ga-achọ ịrụ ọrụ. Iji nyere gị aka ibido, ebe a bụ ndụmọdụ 5 dị mkpa ị ga-ebu n’uche mgbe ị na-emepụta pọtụfoliyo ịntanetị foto gị.
NDMỌD # # 1: Jiri Pọtụfoliyo Nrụpụta
Ka ịchekwaa oge gị mgbe ị na-emepụta weebụsaịtị na-arụ ọrụ prọfesọ ma ọ bụ ọkachamara, jidesie ya ike site na iji ebe nrụọrụ weebụ na-ewu ihe. Enwere otutu Pọtụfoliyo na ebe nrụọrụ weebụ dị, dị ka Squarespace, Wix, na WordPress. Ọzọkwa, imirikiti ebe nrụọrụ weebụ na-ewu ụlọ na-enyekwa ọtụtụ ndebiri na ahazi ịhọrọ site na. Ọtụtụ n'ime ebe nrụọrụ weebụ ndị na-ewu ihe ntanetị na-enye ngalaba wuru-arụ maka ebe nrụọrụ weebụ gị dị ka mgbatị ụlọ foto, ngwaọrụ ịde blọgụ, na iji ngosipụta ekwentị. Maka mmụọ nsọ, lelee ihe ndị a dịka weebụsaịtị webụsaịtị na-ese foto.
Nke abụọ: Mee ka foto gị kwụpụta
N’ezie, ịchọrọ ka foto gị na ọdụ gị gosipụta ka ndị ahịa wee soro gị na-azụ ahịa kama iso ndị asọmpi gị. Ọ n’agaghị ekwu na ị ga-ede naanị ọrụ kacha mma na ebe nrụọrụ weebụ gị, ma zere ibugote foto ọ bụla ị were.
Greatzọ ọzọ dị mma iji mee ka pọtụfoliyo gị dị iche bụ igosipụta foto gị n'ụzọ pụrụ iche na n'ụzọ okike. Na-ebugote foto 3D na ebe nrụọrụ weebụ gị bụ ezigbo ụzọ iji mee nke a, ka ije dị na foto 3D gị ga - ewetara ma foto gị ma ọ bụ akwụkwọ ndenye gị ndụ. Bido na imepụta foto 3D site na nbudata LucidPix.
Nke 3: Hazie Pọtụfoliyo Gị
E kwesịrị ịhazi Pọtụfoliyo gị n'ụzọ ga-egosi ọrụ gị n ’usoro a na-achịkwaghị achịkwa. Zere ndọpụ uche ọ bụla na weebụsaịtị gị wee họrọ maka anya ntakịrị jiri atụmatụ ụcha dị mfe kama. You nwere ike ịhazi foto gị site na edemede na isiokwu dị iche iche, dịka ụdị mgbasa ozi, ụbọchị, ma ọ bụ ọnọdụ. Ọzọkwa, ọtụtụ ndị ị ga - achọ ahịa nwere ike ịnweta ebe nrụọrụ weebụ gị na smartphones, mbadamba, wdg. Ya mere, ụdị ọ bụla ị họọrọ ịhazi Pọtụfoliyo gị, gbaa mbọ hụ na ebe nrụọrụ weebụ gị ka dị. na-arụ ọrụ nke ọma na ngwaọrụ mkpanaka.
Nke 4: Gụnye Ozi Kpọtụrụ Gị Na Weebụsaịtị gị
Onye ọ bụla na-achọ ahịa ga-achọ ụzọ ga - esi nyere gị aka ma ọ bụrụ na ha nwere ọrụ gị, ya mere ọ dị mkpa ka ị gosipụta ozi ịkpọtụrụ gị nke ọma na weebụsaịtị gị. Detuo ozi ịkpọtụrụ gị ma ọ bụ gụnye nke a Ụdị "Kpọtụrụ M" n’ime ebe nrụọrụ weebụ gị. Gbaa mbọ hụ ijikọ ibe mgbasa ozi mmekọrịta ọ bụla na weebụsaịtị gị na nke ọzọ.
Clientsfọdụ ndị ahịa nwekwara ike ịchọ ịmatakwu gbasara gị dị ka onye karịrị ọrụ gị dị ka onye na-ese foto. Gụnye ihe "Banyere m" peeji ijikọ ndị ahịa gị na ọkwa nke gị ma tinye àgwà gị na Pọtụfoliyo.
NDpMỌD # # 5: Mee Mepụta Pọtụfoliyo gị SEO
Ka imechara pọtụfoliyo gị, ịkwesịrị ịmekwu usoro iji hụ na ndị ahịa ga-ahụ weebụsaịtị gị. Significantzọ kachasị mkpa iji dọta okporo ụzọ gaa na ebe nrụọrụ weebụ gị bụ wu SEO. Ị nwere ike meziwanye SEO gị, ma ọ bụ Nchọpụta Nchọpụta Nchọpụta, site na ntanetị nyocha URL nke injin, nchọ ederede, na nkọwa meta.
Ọtụtụ ndị na - ese foto gbakwunye blog na Pọtụfoliyo ha webụsaịtị iji bulie visibiliti nke saịtị ha elu. Nwere onwe gị ịkọ mkparịta ụka dịka oke agụụ maka foto ma ọ bụ akụrụngwa foto ị na-eji. Site na imelite blọọgụ gị oge niile, ị ga - enwe ike iwu okporo ụzọ n'efu, ọnụọgụ nje na saịtị gị na n'oge na - adịghị anya, Pọtụfoliyo gị ga - adọta ọtụtụ ndị ahịa na ndị na - emekọrịta ihe!
Etu aga-eme GIF animimenti na 3 usoro dị mfe →← Esi mepụta GIF na LucidPix